Yintoni uyilo lweScandinavia? -Isihombiso saseScandinavia kunye neeNdlela zeSitayile - Izitayile Zoyilo
Ngobubele bamakhaya aseScandinavia
Uyilo lweScandinavia lunomzuzwana ngoku, kwaye ukuba ukhe wanqwala intloko ngathi, 'ewe, ndiyayithanda imihombiso yaseScandinavia!' kodwa enyanisweni awunalo uluvo olusebenzayo ukuba luyintoni na, ngekhe ube wedwa. Kodwa mhlawumbi uyazi ngakumbi kunokuba uqonda, kuba ivela kuyo yonke imithombo yeendaba zentlalo, iibhlog zoyilo, kunye neemagazini ozithandayo. Masiyiqhekeze, ukuze wenze uncumo oluncinci kwaye unqwale kwaye ufumane iindlela ezipholileyo zokuyisebenza ekhayeni lakho.
Uyilo lweScandinavia lincinci.
Ewe inee-nuances ezenza yahluke kubuncinane, ubuninzi bale mihla, kunye nokuhonjiswa okwangoku, kodwa kwelona nqanaba lisisiseko, Uyilo lweScandinavia lincinci , kugxilwe ekulula nasekusebenzeni. Akukho nto ingamanyala, kwaye ijolise ekusebenzeni, kusetyenziswa izinto zendalo, kunye nokuthatha 'indlela yedemokhrasi' kuyilo, utsho umbhali ILagom: Ubugcisa beSweden bokuPhila kunye nebhlog Ikhaya lam laseScandinavia , UNiki Brantmark. Uyilo lweScandinavia lunesiko lokuzama ukuqinisekisa ukuba wonke umntu unofikelelo kuyilo olulungileyo, hayi abantu abakhethekileyo kuphela, uyacacisa. Kungenxa yesi sizathu le nto uza kubona ubuhle kwiziqwenga zemihla ngemihla. I-IKEA ngumzekelo olungileyo woku.
'I-aesthetic elula ithetha ukuba inokulingana ngaphandle komthungo phantse nasiphi na isimbo kunye nexesha.'
mfondini elf inflatable
Iphefumlelwe nguNdalo kunye neMozulu.
Uyilo lweScandinavia lwavela ngeminyaka yee-1930, nangona lwalukhula ngenene kwiminyaka yoo-1950. Umboniso woyilo Ukuhamba nge-US nase-Canada ngo-1954-1957 kukhuthazwa imisebenzi ngabaqulunqi be-Nordic begxininisa uyilo olulula oluphefumlelweyo ngendalo kunye nemozulu yommandla. 'Isimbo samkelwe kakuhle, kwaye abantu bayabuxabisa ubuhle' bemihla ngemihla ',' amanqaku eBrantmark.
Ukuphucula uBomi bemihla ngemihla nguloo Mqeshi oPhambili.
Kwinqanaba layo, uyilo lwaseScandinavia lufuna ukuphucula ubomi bemihla ngemihla. Amazwe aseNordic afumana nje iiyure ezisixhenxe zobusuku emini ebusika, ke ukukhanyisa kubalulekile . Awuyi kufumana i-carpeting eludongeni, njengoko iinkuni ezilukhuni zendalo okanye imigangatho emhlophe inceda indawo ibonakale ikhanya. Ifanitshala iyasebenza, iphindwe kabini njengogcino, kwaye unyango lwefestile alukho, okanye ubukhulu becala, ukwenzela ukwandisa ukukhanya okuzayo.
Ngokunyanisekileyo kweKhaya lam laseScandinavia
Ukuthungwa kuyayigcina ukuba ingaziva.
Ubuncinci buhlala buthathelwa ingqalelo njengobubandayo kwaye buqaqadekile kubagxeki, kodwa uyilo lwaseScandinavia lwenza ukufudumala ngokusebenzisa amalaphu, endaweni yokuqunjelwa kwezinto ngezinto ezininzi zokuhombisa. Izindwangu ezithambileyo, ezinje ngesikhumba segusha, uboya, kunye ne-mohair, ziyimfuneko kwimozulu ebandayo, kwaye zigcina ubuhle bubhangqiwe, kodwa yongeza umdla onomdla. Isiseko sabo: Nantoni na eyongeziweyo kufuneka ibe nenjongo ebonakalayo.
Iphalethi ayithathi cala, kodwa ungadlala ngombala.
Imibala engathath'icala sisiseko, kuba ukukhanya kwendalo kunqabile kumakhaya aseNordic, kodwa kutsha nje, umbala sele uqalile ukusetyenziswa njenge-aksenti, nangona kunjalo kwiithoni zomhlaba-iblue blues, imifino, grey kunye nebrown. Inkqubo ye- i-shades ephefumlelweyo yendalo inokunceda ekwenzeni isithuba esifana necocoon.
Bona ngakumbi kwi Amakhaya aseScandinavia .
I-Hygge Yimeko Yengqondo, Ayisiyiyo Uyilo.
Ukusukela ngo-2016 wabeka i-hygge kwii-radars zethu, ukuzinikela kumxholo akubonanga nakuphi na ukuthoba isantya, kodwa ungabhalisi kwingcinga eqhelekileyo. Igama lesiDanish elinxulunyaniswa nobunzima ayisosimbo sokwakha konke konke, kodwa kunoko, yimeko yengqondo. Unokufuna ukuyila ngokuhombisa kwakho, kwaye ubukhulu becala, uninzi loyilo lweScandinavia lwenza, kodwa ezi zimbini azitshintshi.
Konke malunga nokulingana.
Ngokufanayo nombono we-hygge, iSweden isebenzisa igama ngcathu , okuthetha ukuba akukho kuncinci kakhulu, hayi kakhulu — ngokusisiseko, ukufumana ibhalansi. 'Ekhaya lam, ndithanda ukufumana ibhalansi phakathi komncinci kunye nokucoceka. Ndiyakuthanda ukudibanisa nokudibanisa endala kunye entsha, kwaye ndizame ukuqinisekisa ukuba akukho zinto zimbini zifana nokubonakala kukhululekile, utshilo uBrantmark. Oko kuthetha ukongeza amalaphu amaninzi ngohlobo lweemfele zeegusha, iitshefu zelinen, kunye neerugs ezilayitiweyo zokunyusa umgangatho wokugoba kunye nokuphumla, ngelixa ugcina ifanitshala kunye nokuhombisa kuncinci kwaye kulungelelaniswe.
'Ubuhle bokuyilwa kweScandinavia kukuba ixhaphake ngokumangalisayo,' utshilo uBrantmark. 'I-aesthetic elula ithetha ukuba inokulingana ngaphandle komthungo phantse nasiphi na isitayile kunye nexesha, ngelixa ubume bemifanekiso eqingqiweyo, obungeyiyo eyomzimba bongeza into yedrama kwigumbi.' Ungasidibanisa indawo yakho uphelele kwihombiso ephefumlelweyo yaseScandinavia, okanye ungabandakanya iziqwenga kancinci, ukuba ufuna ukubamba uyilo. Qiniseka nje ukuba 'ugcina indawo ejikeleze [izinto] zichithakele ukuze ukwazi ukuxabisa ngokulula ubuhle bento nganye, utshilo uBrantmark. Kwaye ukuba awuqinisekanga ukuba ungaqala ngaphi, uBrantmark ucebisa ukuba uthenge kuyo Uyilo ngaphakathi kokuFikelela , eBay , I-West Elm , kwaye, ewe, IKEA .
UkuJongwa koYilo lobuKoloniyali baseFrance
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi Yintoni iHollywood Regency Design?
Zithini kanye kanye ezi ziNdlu zeSitayile soMenzi?
Nasi isizathu sokuba ufuna iBelvedere endlwini yakho Yintoni kanye kanye, uYilo loTshintsho?
Yintoni iSpanish Colonial Style? Yintoni, ngokuchanekileyo, uyilo lwelizwe laseFrance?
Yonke into ekufuneka uyazi malunga namakhaya amaVictoria
Yonke into ekufuneka uyazi ngokuYilwa konxweme
Ikhitshi eliphefumlelweyo laseScandinavia
Yintoni kanye kanye uYilo lweMveli?
Into ekufuneka uyazi ngokuYilwa kweShishini
Yonke into ekufuneka uyazi malunga noyilo lweBohemian
Yonke into ekufuneka uyazi malunga noyilo lweRustic
iisofa ezincinci zamagumbi okulala
iintlobo ezahlukeneyo zezitayile zendlu
izimvo zombala wegumbi lokuhlala
izipho zekrisimesi zokwenza
mhle ukubuyela kwimpahla yesikolo